Maraykanka oo Duqayn Ku dilay 27 Alshabaab ah | SAHAN ONLINE
Maraykanka oo Duqayn Ku dilay 27 Alshabaab ah
BOSASO- Taliska AFRICOM ee howlgalka ciidamada Maraykanka ee Qaaradda Afrika ayaa faahfaahiyay duqaymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan ururka Alshabaab degaan 12km u jira Magaalo ganacsiyeedka Puntland ee Bosaso.
Talisku waxay sheegeen in weerarkaasi oo dhacay 2dii bishan June, ay ku dileen 27 kamid ah kooxda Alshabaab ee ka dagaalanta buurlayda Galgala ee Gobolada Bari iyo Sanaag, iyagoo kaashanaya dowladda Federaalka Soomaliya. Waxay kaloo sheegeen in weerarkaas aysan wax khasaare ah kasoo gaarin dad shacab ah,oo ka ag dhawaa meelaha duqeymahaasi lala bartilmaameedsaday.
Waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in howlgaladaasi ay qayb ka yihiin in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom lagula midoobo howlgallada ka hortagga waxa ay ugu yeereen argagixisada, lana beegsado goobaha ay ku tababartaan ee Soomaliya iyo gobolkaba.
2dii bishan June ayay ahayd markii dagaalyahano Alshabaab ah ay weerar ku qaadeen Saldhig ciidamadda badda Puntland ay ku lahaayeen degaanka Bali-khadar ee gobolka Sanaag, Halkaasi oo ay ku dhinteen 4 askari, 13 kalena ay ku dhaawacmeen. Taliska ciidamadda PMPF oo ka hadlay weerarkaasi waxay sheegeen in ciidmadooda oo kaashanaya ciidamada PSF ay dileen 53 ka tirsanaa Maleeshiyaadka Alshabaab oo ahaa kuwii soo weeraray saldhiga Bali-khadar